Ukuphatha amaphupho ngomama oshonile: izingxoxo noma izingxabano nomuntu oshonile.
Incazelo yamaphupho, lapho wabona umama osephuzile.
Ngisho noma umama eshona, kukhona ukuhlangana okungaqondakali phakathi kwakhe nomntwana. Yingakho umzali osephuzile angase afike ephusheni, ngaleyo ndlela, axwayise ingane yakhe ngento ethile noma abikezele ezinye izenzakalo kuye. Lolu xhumano lwengqondo luhunyushwa ngokuhlukile ngokuhumusha abaphupho, kodwa ngokuyinhloko bonke bobabili banombono wokuthi lesi sibonakaliso esihle, njengoba umama osephuzile engumngane oqaphele ingane yakhe.
Ukusebenzisana nabazali abafile
Ngokusho kwencwadi yephupho kaFreud, abazali abafele bavele emaphupho ethu ezikhathini ezinzima kakhulu futhi ezibucayi, uma sidinga iseluleko sabo esihlakaniphile nokuhlanganyela.
Ukulala ngomama ofile kuhunyushwa njengesixwayiso senhlekelele ezayo. Lokhu kungasebenza kunoma yiziphi izigaba zokuphila - womndeni nomsebenzi. Iphupho lidinga ukuba liqaphele ngangokunokwenzeka empeleni, ngoba izenzakalo ezimbi zingaba nezimbangela ezihluke ngokuphelele.
Ibhuku lephupho likaMiller lithi ukubona umama osephuzile ephusheni futhi ejabule izethembiso zokulala ubumnandi obuhle bemali ngenjabulo yakhe - mhlawumbe ungakwazi ngisho nokuthola into yamaphupho akho.
Umama ofile angaphinde aphuphe ukukuxwayisa mayelana noshintsho olusondelayo - uma ulawula ukukhuluma naye, ukhokhele ngokukhethekile amagama akhe namazwi, ngoba izobonisa uhlobo lwezinguquko ezizayo.
Ukubukeka komzali oshonile ephusheni, njengobuhlungu bokulahlekelwa kwamuva
Yiqiniso, ukuhlukanisa phakade nomuntu osondelene naye kuletha ubuhlungu obubekezelelekayo, yingakho isikhathi esithile emva kokufa, angakwazi ukuza kithi ephusheni, ngenxa yokungafuni ukuvuma ukungena kuye. Ezinye izincwadi zephupho zithi umama oshonile uphupha ngokuphila ezindabeni ezinhle. Ubuthongo akufanele akhohlwe ukuthi, naphezu kokudabuka kokulahlekelwa umoya wothando, impilo iyaqhubeka.
Uma ephusheni umama ohambayo uyakunanga, kusho ukuthethelelwa. Ngisho noma ngabe kukhona ukungavumelani nokuphikisana phakathi kwakho, ngenkathi esaphila, ukumanga komama ephusheni kufanekisela ukuthethelela kwakhe okuphelele. Ngakolunye uhlangothi, amaphupho lapho ubona khona ubaba nomama ophilayo ephila angabonakalisa ukudabuka kwakho nesidingo sokuthandwa. Ukuze kunciphise umthwalo osindayo wokulahlekelwa, kubalulekile ukukhumbula abazali esontweni nokubeka ikhandlela ngemva kokuthula kwabo.
Uma umama osephuzile ekhuphuka ephusheni, bese empilweni yangempela ukwesaba okuye kwahlukumeza isikhathi eside uzongena ekugqibeleni. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi bayobhubha ngokwabo - kuzodingeka wenze imizamo yokulahlekelwa yibo.
Ukungavumelani nokungavumelani nomama oshonile
Iphupho ophikisana ngayo nomama osephuzile, likhomba unembeza wakho ongcolile - mhlawumbe wenza iphutha ongafuni ukuvuma, noma awujabuli nomlingani wakho, kodwa ungaboni ubuhlobo obubandayo. Kufanele ubuyekeze ngokuziphatha kwakho futhi, uma kungenzeka, lungisa isimo.
I-Dream Manager Meneghetti ikholelwa ukuthi ukufunga ephusheni nomama oshonile uthembisa izinkinga, futhi uma kwenzeka uxabana ekamelweni elithile, kuyokuyo futhi izinkinga ziyozamazama.
Ngokusho kwencwadi yephupho likaVanga, ukufunga ephusheni nomama oshonile kusho izenzo ezingenakulinganiswa ezingacatshangwa noma amaphutha, okuyiwona okhokhelwa ukulala esikhathini esizayo esiseduze. Futhi, iphupho elinjalo lingase libe ngumbono wokungaboni ngaso sonke isikhathi emndenini, kuze kube yilehlukaniso, uma ushada. Cabanga ngesimo sakho sengqondo kubathandekayo bakho, unembeza wakho uzokhombisa ukuthi yini okudingeka ishintshwe ukuze kubuyiselwe ukuthula nokuvumelana.
Naphezu kokuthi ukufa komama kungukucindezeleka okukhulu kunoma yimuphi umuntu, akufanele nje ubhale imizwelo yamaphupho lapho kukhona isihlobo esishonile. Mhlawumbe ufuna ukukutshela okuthile.
Ama-champignon nge-sauce yesinaphi
Emuva kuma-90: Ukubambisana Guess Originals & A $ AP Rocky
Ukukhetha okunamandla komshini wokuwasha
Indlela yokudala ukungcola ekhishini
Ukwelashwa kwe-pancreatitis engapheli ngezindlela zomuntu